Tọghata pound magburu onwe Ka Nigerian naira
UN mgbanwe udu data na 11/04/2021 09:47
pound magburu onwe Ka Nigerian naira ntụgharị. Pound magburu onwe ego na Nigerian naira taa na ahia ahia ego.
1 Pound magburu onwe = 522.22 Nigerian naira
Na-egosi uru nke ntụgharị nke pound magburu onwe n'ime Nigerian naira. Ihe omuma banyere mgbanwe nke ego enyere site na uzo ohuru. A na-eme arụmọrụ mgbanwe ego niile n'ụlọ akụ. 1 Pound magburu onwe bụ 522.22 Nigerian naira. Maka 1 pound magburu onwe ugbu a ọ dị gị mkpa inye 522.22 Nigerian naira. Ọnụego pound magburu onwe mụbara megide Nigerian naira site na 0 narị narị nke isi ihe.
Pound magburu onwe (GBP)
Ọnụego mgbanwe Pound magburu onwe Ka Nigerian naira
Izu ole na ole gara aga, enwere ike ịgbanwere pound magburu onwe maka 564.46 Nigerian naira. Ọnwa atọ gara aga, enwere ike ịzụta pound magburu onwe maka 538.52 Nigerian naira. Afọ atọ gara aga, enwere ike ịzụta pound magburu onwe maka 524.57 Nigerian naira. Pound magburu onwe ọnụego mgbanwe gaa Nigerian naira dị mma ihu na eserese a. -1.82% kwa ọnwa - mgbanwe na ọnụego mgbanwe nke pound magburu onwe. 9.78% kwa afọ - ngbanwe nke ọnụego mgbanwe nke pound magburu onwe.
Ọnụego mgbanwe pound magburu onwe (GBP) Ka Nigerian naira (NGN) Na-na Forex mgbanwe ahịa
Converter ego Pound magburu onwe Nigerian naira
Pound magburu onwe (GBP) Ka Nigerian naira (NGN)
1 pound magburu onwe 522.22 Nigerian naira
5 pound magburu onwe 2 611.09 Nigerian naira
10 pound magburu onwe 5 222.18 Nigerian naira
25 pound magburu onwe 13 055.44 Nigerian naira
50 pound magburu onwe 26 110.88 Nigerian naira
100 pound magburu onwe 52 221.75 Nigerian naira
250 pound magburu onwe 130 554.39 Nigerian naira
500 pound magburu onwe 261 108.77 Nigerian naira
Onye ntụgharị ego taa maka 10 pound magburu onwe na-enye 5 222.18 Nigerian naira. Ọ bụrụ na ị nwere 13 055.44 Nigerian naira, mgbe ahụ na Nigeria enwere ike ịgbanwere ya maka 25 pound magburu onwe. Ọ bụrụ na ị nwere 26 110.88 Nigerian naira, mgbe ahụ na Nigeria enwere ike ịgbanwere ya maka 50 pound magburu onwe. O buru na inwere 100 pound magburu onwe, mgbe ahụ na Nigeria enwere ike ree ya maka 52 221.75 Nigerian naira. Ọ bụrụ na ị nwere 130 554.39 Nigerian naira, mgbe ahụ na Nigeria enwere ike ree ya maka 250 pound magburu onwe. Ọ bụrụ na ị nwere 261 108.77 Nigerian naira, mgbe ahụ na Nigeria ị nwere ike ịzụta 500 pound magburu onwe.
Pound magburu onwe Ka Nigerian naira Ọnụego mgbanwe
Pound magburu onwe Ka Nigerian naira taa na 11 April 2021
11.04.2021 520.55054 -37.447874 ↓
10.04.2021 557.998414 -2.195902 ↓
09.04.2021 560.194316 -9.77678 ↓
08.04.2021 569.971096 10.877855 ↑
07.04.2021 559.093241 -6.077806 ↓
Taa 500 GBP = 520.55054 NGN. 10 April 2021, 1 pound magburu onwe akwụ 557.998414 Nigerian naira. Pound magburu onwe ka Nigerian naira na 9 April 2021 dokwara na 560.194316 Nigerian naira. Oke GBP / NGN ọnụego na nọ na 08.04.2021. Nke kacha nta pound magburu onwe ka Nigerian naira ọnụego n'ime nọ na 11.04.2021.
Pound magburu onwe Ka Nigerian naira ọnụego mgbanwe n'akụkọ ihe mere eme
Pound magburu onwe na Nigerian naira akara ego na mba
Pound magburu onwe akara ngosi ego, Pound magburu onwe ego akara: £ (₤). Pound magburu onwe State: British Indian Ocean Territory, Great Britain, Maine. Pound magburu onwe koodu ego GBP. Pound magburu onwe Mkpụrụ ego: penny.